Ntụle Semalt: Gịnị bụ nchịkọta Web?
Nchịkọta weebụ bụ usoro nke ikpokọta ozi site na weebụ. Otú ọ dị, a na-achịkọta data maka nzube dị iche iche. Ngwá ọrụ ntinye aka na-enyere aka ịmepụta usoro nke ikpokọta ozi site na weebụ ngwa ngwa na n'ụzọ dabara adaba. Ya mere, web scrapers chekwaara gị oge buru ibu nke a ga-eji mee ihe ndị ọzọ - bolivia trip.
Ihe atụ nke ntanetị weebụ
Dịka ihe atụ nke ngwa ngwa ntanetị weebụ, ọ na-ewere otu ndị ahịa maka ihe atụ. Iji nweta ezi nduzi, ha nwere ike ịdị na-eme ụfọdụ ọkpụkpọ oku. Mana olee otu ha si enweta nọmba ole ha ga-akpọ? Ọ bụ ezi echiche ịchọọ ndekọ iji wepụta nọmba. Ị maara awa ole ga-eji mee ihe iji nweta nọmba ekwentị nke ọnụ ọgụgụ dị mma nke ndị ahịa? Ọ nwere ike iwepụta oge ma na-akụda mmụọ.
Nke a bụ ebe scraper web na-abịa na aka. Ị nwere ike ime ya iji wepụ ụfọdụ ozi sitere na otu ndepụta na weebụ. Ị nwere ike ịmepụta robot dexi.io iji chọọ ndekọ nke ụlọ ọrụ ndị ahapụtara ọha ma wepụ kọntaktị dị ka nọmba ekwentị na adreesị email. Nke a bụ naanị ihe atụ dị mfe. A na-etinye akwụkwọ ntanetị weebụ na ọrụ ọrụ nchịkọta dị iche iche.
Ngalaba tụnyere ọnụahịa na-ejikwa ígwè ọrụ ntanetị weebụ wepụ ahịa nke ngwaahịa dị iche iche dịka smartphones, hotels, credit cards, and insurance just to mention a few. N'ezie, saịtị ntanetụ ụfọdụ na-ewepu data sitere na saịtị ndị ọzọ tụnyere. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọnụahịa ọnụahịa bụ ihe ọzọ kpatara nchịkọta weebụ.
Ịga n'ihu ndị na-asọmpi gị, ị ga-enwerịrị ohere ịnweta data nke mmadụ ole na ole nwere ike ịbanye. Nke a bụ ya mere ụlọ ọrụ ụfọdụ ji wuo ọtụtụ puku ndị na-achọ ihe ọmụma na-enweghị isi na nke bara uru Na ntinye egwuregwu, ka ị na-enweta data ị nwere karịa ndị ọzọ na-ezigara gị, nke ka mma.
N'eziokwu, inwe ihe ọmụma karịa ndị na-ede akwụkwọ gị na-enye gị n 'ịsọ mpi maka ha. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mba A na B na-achọ ịmalite egwuregwu football, mba nke A egbutụla B na pasent 80 nke ndị na-ezute ha, ọtụtụ ndị na-ere ahịa ga-etinye osisi ha n'obodo A. Ma ọ bụrụ na ebe mgbakọ ahụ dị na Country B, na gị na nanị ole na ole ndị ọzọ na-agbasa ozi mara na A akwụsịtụghị B na ụlọ ikpeazụ ahụ, ị ​​ga-akwụ ụgwọ na B, nakwa eziokwu ahụ na ọtụtụ ndị betrade nwere mmasị na mba A ga-enye gị ego karịa ma ọ bụrụ na i merie. enwe ohere inweta data karịa ndị ọzọ. Ọ na-eme ka ị kpachie ohere ị ga-enwe ma bukwuo ibu uru gị.
Nchịkọta weebụ bụ ngwá ọrụ nyocha bara uru
Ndị nchọpụta na-ejikwa scrapers web maka ọrụ ha. Ụlọ akwụkwọ, NGO, na gọọmentị na-eji ntanetị weebụ. Ụfọdụ wepụtara data dị mkpa maka ụfọdụ ebumnuche dị ka nlekota ala nke Ụwa, imepụta ụgbọala robotic, na ọbụna maka mmepụta nke AI.
Olee otú ị ga-esi malite ntanetị weebụ
Ebe ọ bụ na dexi.io arụpụtawo ngwá ọrụ ntinye ngwa ngwa dị mfe, ọ nwere ike ịmalite site n'ịmụta otu esi eji ngwá ọrụ ahụ. Ọ dị irè maka ntinye data, ntanetị weebụ, na ntanetị weebụ. Mgbe igwe chọrọ data iji dịrị, dexi.io na-enyere aka ịhazi data na igwe.
Ịmalite ugbu a
Mgbe ị na-amalite na ntanetị weebụ gị, ị ga-eji usoro nhazi data ma ọ bụ nchọpụta data iji zere ịkpachi anya. Ịkwesịrị ịkụda ọgụgụ isi gị n'azụ algọridim na data na akwụkwọ. Nke kachasị mkpa, ebe ọ bụ na nke a bụ oge mbụ gị, ịkwesịrị ịdị njikere ịda, mụta ihe site na mmejọ gị ma melite. Tupu ịmalite, nke ka mma.
Gbalịa ya maka n'efu
Ị nwere ike ịbanye ma nwalee ngwá ọrụ n'efu. Iji tinye ya n'ụzọ dị mfe, nchịkọta data nchịkọta data na-arụ otu ọrụ nke ga-ewe otu puku mmadụ ọtụtụ afọ iji wuchaa ya.